I-Spotify Student Discount (2020) - Ungasifaka Kanjani Isiqondisi - Ezokuzijabulisa
I-Spotify iyisevisi yokusakaza umculo enkulu kunazo zonke emhlabeni. Izigidi zabantu ziyisebenzisela izidingo zazo zokusakaza. Kunezigidi zabaculi abavela kuyo yonke indawo endaweni yesikhulumi. Abafundi bangezinye zezilaleli ezibhekiswe kakhulu kulolu hlelo lokusebenza. Ibhizinisi lizama nokubuyisela emphakathini, futhi. Njengomfundi, siphakamisa ukuthi usizakale ngalesi sivumelwano esimnandi sabafundi.
Ukutshalwa kwemali kwakho konke kuzoba kuncane kakhulu. Kulo mhlahlandlela, sizohlanganisa izici ezahlukahlukene zesaphulelo sabafundi. Sithemba ukuphendula yonke imibuzo yakho futhi sisuse noma ikuphi ukungabaza.
Eminye Iminikelo Yesitshudeni Okufanele Uyibheke
Isaphulelo se-YouTube Premium Student
Izinyathelo zokubhalisela i-Spotify Student Discount:
Inqubo yokubhalisa ilula kuwo wonke umuntu. Noma ngubani angajoyina ipulatifomu futhi athole lokhu kunikezwa. Iyatholakala kubafundi abane-ID esemthethweni yasekolishi noma eyunivesithi. Kwezinye izifunda, abasebenzisi futhi badinga ukuba nekheli le-imeyili .edu. Uma uhlangabezana nale mibandela engenhla, qala inqubo yokubhalisa ngokushesha. Nasi umhlahlandlela wethu wokukusiza. Landela izinyathelo zomhlaba omusha ngokuphelele wokusakazwa komculo.
Isinyathelo sokuqala ukuvakashela iwebhusayithi ye-Spotify. Ungakwazi Chofoza lapha bese uhlola ipulatifomu. Kuzokusa ekhasini lasekhaya le-Spotify. Kunayo yonke imininingwane yamapulani nokunikezwayo kule webhusayithi. Chofoza inkinobho ye-premium phezulu ngakwesokudla kwekhasi.
Ikhasi lewebhu le-Spotify premium likunikeza imininingwane mayelana nokubhaliselwe okuhlukahlukene okutholakalayo. Abasebenzisi bangathola isaphulelo somfundi lapha. Skrolela phansi ukuthola uhlelo olushibhile ngamathani ezinzuzo ezingeziwe. Chofoza kunkinobho yokuqalisa ukuze uqale ukudala i-akhawunti yakho entsha.
Abasebenzisi abasha nabadala bobabili banenketho yokuthola lesi saphulelo. Uma usunayo i-akhawunti, ngena ngemvume ngemininingwane yakho. Iwebhusayithi yeSpotify nayo inethuba lokungena ngemvume nge-Facebook ne-Apple ID. Njengomsebenzisi omusha, ungachofoza inkinobho ethi 'bhalisela i-Spotify' etholakala ngezansi.
Ikhasi lokubhalisa lizokucela imininingwane ethile edingekayo yomuntu siqu. Ungabhalisa nge-Facebook ukwenza inqubo isheshe. Kubandakanya ukusetha i-akhawunti yakho entsha nge-imeyili ne-password. Abasebenzisi futhi kufanele bangeze usuku lwabo lokuzalwa, igama, njll. Xazulula i-captcha bese uchofoza inkinobho yokubhalisa. Izosetha khona manjalo i-akhawunti yakho entsha.
Inqubo yokuqinisekiswa kwezinyathelo ezintathu idinga ukuthi ufake i-ID yakho ye-imeyili yasekolishi. Izobheka khona manjalo ukubhaliswa kwakho futhi ikuqinisekise ngesaphulelo sabafundi. Ungawuthola ngokushesha lo mnikelo ngaphandle kokubambezeleka kokuqinisekisa. Isebenza kuwo wonke amakolishi ase-US. Abafundi badinga ukufaka igama labo, inyuvesi kanye nosuku lokuzalwa. Chofoza inkinobho yokuthola i-premium ukuze uqhubeke.
Isinyathelo sokugcina senqubo ukufaka imininingwane yakho yokukhokha. Abasebenzisi bangakhokha besebenzisa ikhadi lesikweletu kuwebhusayithi. Kuvikelwe Ubumfihlo ukuqinisekisa ukuthi ungaba nokuthengiselana okuphephile.
Voila! Uthenge ngempumelelo i-Spotify Student Discount. Sithemba ukuthi ungaba nesikhathi esihle usebenzisa le nsizakalo. Kuyadingeka kunoma iyiphi inhloko yomculo eyunivesithi.
Izici zeSpotify Premium:
Izici zezinhlelo zesaphulelo sabafundi seSpotify ziyahluka ngokuya ngesifunda sakho. Ungazibonela izinzuzo uma usuthengile. Nazi izinzuzo zokwenza lokhu kuthenga.
1. Ukusakaza okungenamkhawulo okungenazikhangiso nokulanda
Abasebenzisi be-Spotify premium bangagcina umculo wabo ukuze bawulalele usohambeni. Sonke sizizwile izikhangiso ezicasulayo zeSpotify. Manje usungazigwema ngokutshala imali okuncane. Yonke imifudlana engenazikhangiso ilungele izidingo zakho zomculo. Ungaba nesipiliyoni sokusakaza esingenamthungo futhi esibushelelezi.
Isaphulelo sabafundi sinciphisa umthwalo wakho wezinkokhelo ezibizayo zanyanga zonke. Isici sokulanda sikuvumela ukuthi ugcine umculo wekhwalithi ephezulu kalula. Abathathi nendawo yokugcina eningi futhi. Ukusakaza ungaxhunyiwe ku-inthanethi kuyatholakala ukonga idatha ohambeni.
Isivivinyo samahhala sezinyanga ezi-3
AbakwaSpotify njengamanje banikeza bonke abafundi base-US isilingo samahhala sezinyanga ezi-3 salolu hlelo. Ibhili yakho yokuqala izofika ezinyangeni ngemuva kokubhalisa.
Kuyinto utshalomali omuhle kakhulu kunoma ngubani onentshisekelo. Nokho, kusebenza kuphela uma usukulungele ukuzibophezela kwesikhathi eside. Abasebenzisi kufanele bahlale kulolu hlelo lwesaphulelo sabafundi unyaka. Abasebenzisi abakwazi ukukhansela okubhaliselwe ngemuva kwesivivinyo sezinyanga ezintathu. Kuyisivumelwano esihle kakhulu kunoma ngubani olalela umculo omningi. I-Spotify inelabhulali enkulu kunazo zonke njengamanje.
3. Okungeziwe kokubhaliselwe
Isaphulelo sabafundi sifika sixhunyaniswe nokubhaliselwe kwe-Showtime ne-Hulu (ad). Lezi izengezo ezinhle kunoma yimuphi umfundi.
Ungajabulela okuqukethwe kwe-premium ngokubhaliselwe okungabizi. Sonke sisebenzisa u-2020 phambi kwezikrini zethu. Ukusakaza imibukiso ejabulisayo nama-movie kuba lula ngalezi zinsizakalo. Abafundi bavame ukuba nesabelomali esiphansi kepha ukusisebenzisa kulolu hlelo kubonakala kufanelekile. Kunokubhaliselwe okuningi okwengezwe kunani kulolu hlelo.
Sithemba ukuthi uzithandile izici i-Spotify premium enikeza abafundi bazo. Kuyisengezo esihle kakhulu ezinzuzweni zakho.
Izinsizakalo ze-Spotify premium ziyatholakala ngentengo ebiza ngokweqile. Isaphulelo sabafundi sishibhile ngisho. Izindleko ngu- $ 4.99 ngenyanga ngesaphulelo sabafundi. Sincoma ukuthi uthenge lolu hlelo futhi usebenzise izinzuzo ezinhle kakhulu. Amanye amasu ayatholakala ngenani elifanele. Izinhlelo ezijwayelekile zizokubiza u- $ 9.99 ngenyanga. Noma ngubani ongafundi eyunivesithi angaphinda futhi azame uhlelo lwe-premium. Kuyinto enhle kakhulu efonini yakho. Uma ukulalela umculo kuyintandokazi yakho, intengo akufanele ibe yisici.
Ukuqinisekisa okwenziwa ngesandla:
Abanye abafundi bangahle babhekane nezinkinga ngokuqinisekiswa kwabo kwe-Spotify. Kungenzeka ezimweni ezimbalwa ezingavamile. Uma iwebhusayithi ingakwazi ukulandelela ukungena kwakho, ukuqinisekiswa okwenziwa ngesandla kuyindlela. Abasebenzisi bangakubheka lokhu kuzilungiselelo zabo zephrofayela. Kufanele uthumele i-imeyili ku-Spotify enomazisi wakho waseyunivesithi. Kuzothatha izinsuku ezimbalwa, kepha inani lizobiza kakhulu. Siphakamisa le nketho uma kungabonakali ukuthi kwenziwa ukuqinisekisa okuzenzakalelayo.
Siyethemba ukuthi lo mhlahlandlela ubewusizo olukhulu kubafundi bethu. I-Spotify uhlelo lokusebenza lomculo lwezigidi zabalaleli. Ungayizama namuhla futhi uhlole insiza. Dala uhlu lwadlalwayo oluhle kakhulu bese wabelana ngalo nabangani bakho. Kunezizathu eziningi zokwenza i-premium. Sithemba ukuthi unesipiliyoni esihle ngale nsizakalo yokusakaza izingoma.
5 $ amazon ikhodi yekhadi lesipho
ukubukela iziteshi ze-tv zamahhala ku-intanethi
khulula inthanethi roblox akukho thwebula
isiguquli sefayela se-youtube to mp3
ungayithola kanjani ikhodi ye-psn kusuka ku-amazon
bukela imibukiso ye-tv ku-android mahhala online